Izixhobo ezitsha ezihambelana neKhayaKit | IPhone iindaba
Izixhobo ezitsha ezihambelana neKhayaKit
I-Apple yenza ukuba kufumaneke kubo bonke abasebenzisi inani elikhulu le- Izixhobo ezihambelana neKhayaKit Ngokusebenzisa iwebhusayithi yabo, nje ukuba sityelele ukujonga ukuba ngaba isixhobo esifuna ukusithenga siyahambelana neqonga elizenzekelayo lika-Apple.
Ihlaziywa rhoqo ngokongeza iimveliso ezintsha, njengoko kunjalo kwimeko esixoxa ngayo kweli nqaku. Ukusuka kwiApple, baye bahlaziya Icandelo elihambelana nee-routers kunye neekhamera zokhuseleko, amacandelo apho bongeze iimveliso ezininzi.
Ii-routers ezenziwe ngeKhaya zingalawulwa kwifowuni yakho ye-Apple, esivumela ukuba sinxibelelane ngokulula kwaye ziluhlobo lwe-mesh. Ii-routers ezenziwe ngeKhaya ezinokukhuseleka ngokuthe chatha xa kuthelekiswa nemizila ye-Wi-Fi yemveli. Ukongeza, ezi modeli ziqinisekisiweyo zeKhayaKit zinako yenza i-firewall ejikeleze nganye yezixhobo ezifanelekileyo ukuze ikhaya libahlukanise bodwa kunye nokunciphisa umngcipheko wengxaki yokhuseleko.
1 Iirutha ezintsha ziyahambelana neKhayaKit
2 Iikhamera ezintsha zoKhuseleko ezihambelana neKhaya
Iirutha ezintsha ziyahambelana neKhayaKit
eero Pro (enemingxuma)
Inkqubo yeLinkys Velop Mesh yeWi-Fi
NjengeeKhowudi ezinikwe iKhayaKit, iikhamera ezisebenza ngeKhayaKit zilawulwa kwizixhobo zeApple. Nangona kunjalo, eyona nto intle malunga neekhamera ezenziwe ngeKhayaKit kukuba iividiyo ezirekhodwe kwezi khamera zilayishwe ngqo kwi-iCloud, ke soze zifikelele kumncedisi womenzi wekhamera. Ewe, le nkonzo ayihambelani nazo zonke iiakhawunti ze-iCloud, kodwa kuphela kwabo banesivumelwano se-200 GB okanye nangaphezulu.
Iikhamera ezintsha zoKhuseleko ezihambelana neKhaya
Ikhamera yangaphakathi yeNetatmo
Ikhamera yangaphandle yeNetatmo
eufyCam 2 uthotho
uthotho lwe-eufyCam 2C
Zonke iimveliso ezongezwe kwiwebhusayithi ye-Apple HomeKit ziye zabhengezwa njengeKhaya eKit ehambelanayo, ke akufuneki bathathe ixesha elide ukufumana uhlaziyo oluhambelana ne-firmware ukubenza bahambelane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Izixhobo ezitsha ezihambelana neKhayaKit
Ezona zixhobo zibalaseleyo kwizincedisi zoLwesihlanu oMnyama